वैचारिक युवाहरुले अब राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउनुपर्छ – गोल्ड मेडलिस्ट ज्ञवाली - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
विकास ज्ञवाली राम्रो अङक ल्याएर बिद्यालय तह देखी स्नातकोत्तर सम्मको पढाई पुरा गर्ने एकजना आशावादी युवा हुन । ज्ञवाली समाज परिवर्तनका हरेक जस्तो मोर्चामा आफुलाई अग्रपङक्तीमा उभ्याउँदै अध्ययनमा उत्कृष्टता हाँसिल गर्ने युवाहरुका रोल मोडल पनि हुन । हालै मात्र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको रवैया विरुद्ध सुरु भएको नागरिकस्तरको आन्दोलनमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । उत्कृष्ट डिग्री र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक ईमान्दार नेताका पुत्र उनी समाज परिवर्तनको बागडोर अब युवाहरुको हातमा नआए देशको अवस्था झन बिग्रिने दावी गर्छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको छोरा भएर पनि उनले युवा सङघ नेपालको नेतृत्वमा पुग्न तल्लो तहदेखी आफ्नो राजनीति सुरु गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनै ज्ञवालीसंग नेपालपाटीका लागि सम्पादक दीपेन्द्र खड्काले गरेको कुराकानी ।
तपाईको जन्म कस्तो परिवारमा भयो ?
मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमी पुर्णतयाः कम्युनिष्ट हो । पुख्र्यौली थात थलो गुल्मी भएपनि म दाङको मानपुर गाविसको बनकट्टीमा जन्मिएको हुँ । बनकट्टी गाउँ संस्कृत विश्वविद्यालयसंगै रहेको छ । जसको कारण त्यस वरपर प्राज्ञिक वातावरण रहेको छ । मेरो परिवारको कम्युनिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमीले मलाई सानै देखी राजनीतिक वातावरणमा परिचित गरायो ।
तपाईको शिक्षा –दिक्षा कहाँ र कसरी भयो ?
मैले प्रारम्भिक शिक्षा दाङको विजौरी, बेलझुण्डी र दुधरास स्कुलमा आर्जन गरेँ । त्यसपछिवुवाको राजनीतिक व्यस्तताका कारण हाम्रो परिवार काठमाडौमा बस्न थाल्यो । बुवाकै साथी एमालेका नेता प्रदीप नेपालकै सल्लाहमा काठमाण्डौको कञ्चनजङघा सेकेन्डरी स्कुलमा भर्ना भएँ । मैले एसएसली त्यही स्कुलबाट पास गरेको हुँ ।
त्यसपछी उच्च माध्यमिक शिक्षा डिल्लीबजार स्थित नेश्नल इन्टिग्रेटेड कलेजबाट पुरा गरेँ । त्यसपछी म स्नातक पढ्न त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ । त्यहाँ अली बढी राजनीतिमा लागियो । त्रिचन्द्रबाट म स्नातकोत्तर पढ्न केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर गएँ । सानैदेखीको रुची अनुसार समाजशास्त्र-मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागमा भर्ना भएर अध्ययन पुरा गरेँ ।
तपाईले त्रिभुवन विश्वबिद्यालय अन्र्तगतको मानविकी सङकायको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा मानवशास्त्र विषयमा सर्वोत्कृष्ठ अङक प्राप्त गर्दै नेपाल विद्याभुषण ग र ख प्राप्त गर्नुभयो । यी उपलब्धी प्राप्त गर्नुमा के कुराको बढी भूमिका देख्नु हुन्छ ?
शैक्षिक उपलब्धिका लागि सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा स्वअध्ययन नै हो । स्वअध्ययनबिना कुनै पनि मानिसले पुर्ण शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैन । अझ भनौं सफल हुन सक्दैन । पढाइ व्यक्तिगत सम्पन्नताको लागि मात्र नभै समाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने दिशामा केन्द्रीत भएमा अझ बढी गहन हुन सक्दछ । मेरो विचारमा गहन अध्ययनको लागि घरको वातावरण प्राज्ञिक हुनु पर्दछ । सौभाग्यवश त्यो अवसर मलाई प्राप्त भयो । त्यो प्राज्ञिक वातावरण सबैलाई नमिल्न पनि सक्छ । तर परिश्रम गर्ने बानी भने अवश्य चाहिन्छ ।
यस्तै, विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान हाँसील गर्न त्यसमा निरन्तर तार्किक छलफलहरु गर्नुपर्दछ । त्यस्ता तार्किक छलफल गर्न सक्षम साथिहरु मैले निरन्तर पाइनै रहेँ । विषयवस्तुमा पकड राख्ने गुरुहरु संगको सङगतले पनि आफ्नो शैक्षिक स्तरलाई सुधार्न ठुलो सहयोग मिल्दछ । मेरो एउटा बुझाई छ, स्वअध्ययनलाई ‘फिनिसिङ’ गर्न प्राज्ञिक व्यक्तिको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
राम्रो बिद्यार्थी बन्न चाहानेहरुलाई तपाईको सुझाव के छन् ?
राम्रो बिद्यार्थी हुनका लागि त निरन्तर पढ्ने नै हो । तर पढेर मात्र पनि हुदैन । विद्यार्थीको प्रमुख दायित्व निरन्तर लगनशिल भएर पढ्ने हो । पढ्दा पनि विद्यार्थीले आफुले कस्तो लेखकको लेखाई पढ्दैछु भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । स्तरहिन लेखकका लेखाइ धेरै पढ्नु भन्दा स्तरिय लेखकको लेखाइहरु थोरै पढ्दा ज्ञानको दायरा फराकिलो बन्न सक्दछ । नेपालमा घोक्ने प्रचलन बढी छ ।
म त्यसको पहिले देखी नै विरोधी हुँ । पढ्दाएउटै सामग्रीलाई बारम्बार नपढी फरकफरक पढ्दा आफ्नो चेतनास्तर सम्बृद्ध हुन्छ । त्यसबाटनतिजा पनि राम्रो प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने मेरो विश्वास हो । अर्को, हाम्रो पढाई बढी विषयगत हुन्छ । तर, बस्तुगत पढाइले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन बढी सहयोगी हुने अनुभव मैले गरेको छु । आफुले कुन विषय पढ्ने हो त्यसको छनौट विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र क्षमतालाई आधार मानेर गर्नु पर्दछ । सवै विषयहरु आफैमा उत्कृष्ट हुन्छन् ।
हाम्रा धेरै विद्यार्थीले परिवारको र सामाजको प्रभाव र दवावमा गलत विषय छनौट गरेर पछि असफलता प्राप्त गर्ने गरेका छन् । पढ्ने बेलामा प्रत्येक विद्यार्थीले आफ्नो समाजिक, राष्ट्रिय र मानविय उत्तरदायित्व के हो भन्ने विषयमा सधै सजग र जिम्मेवार हुनु पर्दछ । ज्ञान बाँड्दा बढ्ने कुरा हो । तसर्थ आफुले प्राप्त गरेको शिक्षा अन्यलाई पनि बाँड्दा सिङगो समाजप्रतीको उत्तरदायित्व पुरा गरिरहेको जस्तो महशुस हुन्छ ।
तपाई एकजना शीर्ष कम्युनिष्ट नेताको छोरा भएर पनि पार्टीका अन्य कार्यकर्ताहरु सरह देखिन रुचाउनुहुन्छ । किन ?
म आफु जस्तो छु त्यस्तै देखिएको छु । (हाँस्दै ) म यसैमा खुशी छु । अरु जस्तो रातदिन बुवाकै कुरा गरेर बिताउने मेरो बानी छैन । समयले बुवालाई संस्कारयुक्त राजनीति गर्न सिकायो । आज त्यो मेरा लागि आदर्श बनेको छ । यसले एउटा साधारण जीवन जिउन त सहयोग गरेको छ नै, संस्कारयुक्त समाज निर्माणको परिकल्पना गर्न पनि सिकाएको छ ।
अर्को, मान्छेको प्रमुख कुरा उसको आफ्नो व्यक्तिगत स्वभाव, चाहना र व्यवहार प्रमुख कुराहो । एउटा विद्यार्थी सधै सरल जीवन बाच्नु पर्दछ भन्ने मेरो बुझाई आजसम्म पनि क्रियाशिल छ । एउटा कम्युनिष्ट नेता सधैभरी साधारण र सरल हुनु पर्दछ । उसले आफ्नो परिवारिक वातावरण पनि आम जनताको जस्तै साधारण बनाउनु पर्दछ ।
मेरो बुवा अहिलेसम्म पनि त्यसैमा अडिग हुनुहुन्छ । बुवाबाट पाएको यो आदर्शलाई म कायम राख्न कोशिस गरिरहेको छु । अरुले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा छैन । म विश्वास दिलाउँछु त्यो भोली सम्म पनि कायम रहन्छ । बुर्जुवा, सम्भ्रान्त, जमिन्दारी जिवनस्तर बाँचिरहेको नेता कदापी असल कम्युनिष्टहुन सक्दैन ।
तपाई धेरै यती क्षमतावान मान्छे । तर किन राजनीतिमा आकर्षित हुनुभएको ?
राजनीति भनेको समाज र आम जनतालाई पार्ने प्रभावको दृष्टिकोणले सवैभन्दा महत्वपुर्ण क्षेत्र हो । राजनीति विना देश र जनताको मुक्ती र सम्बृद्धिको बाटो अरु छैन । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, राजनीतिमा समाजका सवैभन्दा क्षमतावान, इमान्दार र वैचारीक मानिसहरुको नेतृत्व रहनु पर्दछ ।
जुन समाजमा उत्कृष्ट युवाहरु राजनीतिमा सामेल हुन्छन् त्यो समाज विकसित अवश्य हुन्छ । जुन समाजको राजनीति क्षमताहिन व्यक्तिहरुको नियन्त्रणमा रहन्छ, त्यो समाज सकारात्मक दिशामा अगाडी बढ्न सक्दैन ।
केही समय यता हाम्रो राजनीति पनि क्षमताहिन व्यक्तिहरुको नियन्त्रणमा फस्दै गईरहेको छ । त्यसैले हामी स्रोत र साधनमा सम्पन्न भएपनि आर्थिक रुपले संसारकै सवैभन्दा दरिद्र मुलुकको सुचिमा सुचिवद्ध छौँ । यो कुराले मेरो युवा मन मस्तीष्कलाई बारम्बार झस्काइरहन्छ । यो नै मलाई राजनीतिमा अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने तत्व हो । राजनीतिलाई सहि दिशा प्रदान गर्न समाजका उत्कृष्ट र क्षमतावान युवाहरु राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु अनिवार्य छ ।
युवाहरु नै राजनीतिमा आउनु पर्छ भन्नुका पछाडीको कारण चाँही के हो?
सानै देखि मेरो एउटा बुझाई छ, प्रौढ मानिसहरु मानसिक रुपले नै यथास्थितिवादी हुन्छन् । उनिहरुमा रिस्क लिएर निर्णय गर्नसक्ने क्षमताको अभाव हुन्छ । प्रौढ व्यक्तिलाई विभिन्न पारिवारिक सामाजिक दायित्वहरुले अनावश्यक दवावमा राखिरहेका हुन्छन् ।
जुन देशको राजनीति प्रौढहरुको नियन्त्रणमा हुन्छ, त्यो देश द्रुततर गतिमा विकासको दिशामा अगाडी बढ्न सक्दैन । संसारमा कुनै मुलुकको तिव्रतर प्रगतिको लागि युवा नेतृत्वको भुमिका रहने गरेको छ । युवाहरु परिवर्तनशील हुन्छन् । स्वभावैले उनीहरु महत्वकाङक्षीहुन्छन् । आफ्नो समाजको भविष्यको चिन्ता युवाहरुलाई अन्य उमेर समुहकाहरुलाई भन्दा बढी हुन्छ ।
युवाहरुको मस्तीष्कले नयाँ नयाँ विषयवस्तु तथा आयामहरुलाई सजिलै ग्रहण गर्न सक्दछन् । यसले उनीहरुको मानसिकतालाई फराकिलो बनाउँछ । स्वभाविक रुपले भन्दा युवाहरु प्रविधि मैत्री पनि हुन्छन् । युवाहरुमा रिस्क लिएर काम गर्न सक्ने क्षमता प्राकृतिक रुपले पनि बढी हुने भएकोले युवा नेतृत्व आवश्यक छ । तसर्थ, समाजलाई समुन्नतिको दिशामा तिव्र रुपले अगाडी बढाउने हो भने युवाहरुको नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्दछ ।
अब नेपालको राजनीतिमा क्षमतावान युवाहरुलाई आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?
यो निकै ज्वलन्त प्रश्न हो ।क्षमता भएका युवाहरु आज युरोप र अमेरिक तिर बरालिदै छन् । केहीकठिन आर्थिक समस्याका कारण खाडीमा पसिना चुहाउँदै छन् । नेपालमै रहेका केही साथिहरु पनि विदेशको चक्करमा भौतारी रहेको देख्छु । यो नेपाली युवाहरुका लागि ठुलो बिडम्वना हो ।
यसको सिधा अर्थ हो, नेपालको राजनीति अत्यन्त गलत व्यक्तिहरुको नियन्त्रणमा जादैछ र यसले देशलाई अझ अस्तव्यस्त मात्र होईन अनियन्त्रित बनाउने निश्चित छ ।गलत नेतृत्वको हातमा राजनीति पुग्दा देशको हविगत कस्तो होला ? तपाईले कहिल्यै कल्पना गर्नु भएको छ ?हाम्रो पाठ्यक्रम अत्यन्त अराजनीतिक र उपभोक्तावादी बन्दैछ । राजनीतिमा नागरिक सहभागिताको महत्वको बारेका विषयवस्तुहरु पाठ्यसामग्रीहरुमा समावेश गरे त्यसको दीर्घकालिन लाभ मुलुकले उठान सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
अब प्रत्येक राजनैतिक दलहरुले आफ्ना युवा कार्यकर्ताहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दै समाजका अन्य युवाहरुलाई पनि राजनीतिमा आकर्षित गर्न सके यसप्रतिको वितृष्ण पालेर विदेशीने दर घट्न सक्छ । राजनीतिलाई अपराधिक मनोवृत्तिका युवाहरुको प्रभावबाट मुक्त गर्नु पर्दछ । मेरो विचारमा राजनीतिमा विचारको महत्वलाई पुर्नस्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता तत्काल देखिएको छ । जहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ मात्र क्षमतावान मानिसहरु सहभागी हुन सक्दछन् । राजनीतिमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने क्षमतावान युवाहरुलाई पनि राजनीतिमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
तपाईहरु जस्ता युवाहरु युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिका जान चाहान्छन् । तर तपाई चाँही किन नेपालमै राजनीति गर्न तम्सिनु भएको ?
विदेश जाने वा स्वदेशमै केही गर्ने, यो मानिसको स्वतन्त्रताको कुरा हो । विदेश जाने कुरालाई धेरै घृणा गर्नु भन्दा बरु विदेश जाने वातावरण नै सिर्जना नगर्ने तर्फ लागे त्यसबाट राष्ट्रलाई फाईदा हुन्छ । कोही विदेश गएर आफ्नो आर्थिक अवस्था अलिकती भएपनि उकास्छु, सीप र ज्ञान लिएर आउँछु भन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर पछिल्लो समय नेपालमा एउटा प्रवृक्ती मौलाएको छ ।
उमेर, जोश जाँगर हुँदासम्म विदेशमा रमाउने तर वृद्धभक्ता खान चाँही नेपाल आईपुग्ने । अब यसलाई परिवर्तन नगरी अघि बढ्न सकिन्न । तर मानिसलाई जहाँ बस्दा आत्मसन्तुष्टी मिल्छ त्यहि बस्ने हो । जे गर्दा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ त्यही गर्ने हो ।
तर, मेरो जिवनमा धेरै ठुला ठुला व्यक्तिगत महत्वकाङक्षाहरु छैनन् । आम नेपाली युवाहरुको तुलनामा व्यक्तिगत रुपमा म धेरै नै सम्पन्न छु । यदि यो सम्पन्नताले मलाई सन्तुष्टी दिन सक्दैन भने जति ठुलो सम्पन्नताले पर्ने सन्तुष्ट गर्न सक्ने छैन । म आफ्ना धेरै इच्छा तथा आकाङक्षाहरुलाई तत्काल पुरा गर्न सक्ने हैसियतमा छु ।
मलाई थाहा छ, जो मानिसले व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिको लागि मात्र काम गर्दछ त्यो कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन । मेरो धेरैजसो व्यक्तिगत स्वार्थहरु पुरा गर्ने क्षमता मैले आफुमा विकसित गरिसकेको छु। अव एक कदम अगाडी बढेर यो समाजका र राष्ट्रका समस्या समाधानमा आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्ने दिशामा अगाडी बढ्ने प्रयास गर्दैछु ।
तपाईलाई एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको छोरा भन्दा बढी गर्व महशुस हुन्छ की आफ्नो नाम लिँदा ?
(हाँस्दै) व्यक्तिगत रुपमा मलाई पार्टी उपाध्यक्षको छोरा भन्दा गौरवको अनुभुति नै हुन्छ । तर, राजनैतिक क्षेत्रमा आफ्नो नाम लिदा बढी खुशी हुन्छु ।
म बुवा, आमा, दाई, भाउजु, दीदी, भिनाजु, बहिनी, भाई, भतिज, भान्जिहरु छौं ।
वुवाको आदर्शलाई मैले कायम राख्न सक्छु जस्तो लाग्छ ?
यो निकै कठिन काम हो । बदलिएको समाज र परिस्थिति हेर्दा वुवाले कायम गरेको अत्यन्त कठीन छ । तर, वुवाले कायम गरेको आदर्शलाई बचाई राख्न मेरो प्रयास जारी रहने छ ।
तपाईको विचारमा नेपाली युवाहरुका प्रमुख समस्याहरु के हुन?
युवाहरुको सवैभन्दा प्रमुख समस्या बेरोजगारी हो । हाम्रो गतिहिन समाजमा प्राप्त सवै अवसरहरुमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभाव छ । नातागोता र चिनजानका भरमा मात्र काम पाउने परिपाटी छ । अर्को कारण अत्यन्त अव्यवहारीक पाठ्य सामग्री पनि हो । यदीप्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा भई दिएको भए नेपाल आज यो अवस्थामा हुने थिएन ।
नेपालका गाउँहरुमा वृद्ध–वृद्धा, महिला र बालबालिकाहरु मात्र हुने थिएनन् । त्यहाँ जोश र जाँगरले भरिएका युवाहरु हुन्थे होला । हाम्रा पाखाबारीहरुमा हरियाली छाउँथ्यो होला । बाँझो खेतमा धानका बाला झुल्थे होला ।
अर्को, स्रोत र साधनको वितरण र उपयोगका सवालमा युवाहरुलाई बञ्चित गरिएको छ । भाग्यवादी संस्कृतिले युवाहरुलाई प्रभावमा पारेको छ । उपभोक्तावादी संस्कृतिले युवाहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिदैछ । स्वयम् राज्यले राजनीति र युवाहरु बीचको दुरी बढाउदै लगेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु युवामैत्री छैनन् । युवाहरुमा रहेको सृजनात्मक सोचहरुको प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन । समग्रमा भन्नु पर्दा नेपाली युवाहरु निराशा र दिशाहिनताको अवस्थाबाट गुज्रीरहेका छन् ।
अहिले राजनीतिमा अलावा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले राजनीतिको अलावा आफ्नो गुजाराका लागि काम गरिरहेको छु । अहिले नेपालमा नागरिक आन्दोलन निष्कृय प्रायः छ । कुनैपनि समाजको विकासमा नागरिक आन्दोलनको खवरदारी अपरिहार्य छ । अख्तियार प्रमुख लोकमानका अलोकतान्त्रिक र निरङकुश गतिविधि विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी छ ।
हालै मात्र म एउटा परोपकारी काममा संलग्न भएको छु । हामी केही साथिहरु मिलेर कालिकोटको कालिकोट जुविधा, बालिचौरकोसत्यदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्नको लागि हामीहरुले पुस्तकहरु संकलन गरिरहेका छौँ ।
अर्को,युवाहरु उत्पादनसंग जोडिनु पर्दछ । आर्थिक आम्दानी तथा पेशागत विकासको लागि विभिन्न संघ सस्थाहरुमा तालिम तथा अनुसन्धान परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत छु । त्यस बाहेक अध्ययन र लेखनको नियमित कार्य त चलि नै रहेकोछ ।
तपाईलाई सबैभन्दा छिटो मन छुने कुराहरुका के के हुन ?
मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो । मेरो मन कष्टकर जीवन विताइरहेका मानिसहरु, सडकमा बेवारिसे बृद्ध बृद्धा र उपचारको अभावमा जीवन विताई रहेका विरामीहरुले मलाई धेरै ठुलो पीडा हुन्छ ।मलाई कुनै समाजको चित्रण गर्दै लेखिएका सजिव लेखन तथा सजिव तस्वीर तथा कला सामग्रीहरुले अत्यन्त प्रभावित पार्दछन् । अर्को, आदर्शवान व्यक्तिका जीवनगाथाहरुले चाँडै प्रभावित गर्दछन् ।
तपाईले अहिलेसम्म पढेका कृतिहरु मध्य कुन कृतिले बढी मन जित्यो ?
कार्ल माक्र्सको कम्युनिष्ट मेनुफेस्टो, डार्विनको ओरीजिन अफ द स्फिसिज, बाबा रामदासको वि हेयर नाउ र नेपाली लेखकको कृतिहरुमा डोरबहादुर विष्टको फेटालिज्म एण्ड डेभलपमेन्ट र नेपालीमा लेखिएकोमा आहुतिको नेपालमा वर्ण व्यवस्था र बर्ग संघर्ष सवैभन्दा मन छुने कृति हुन् ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशीने युवाहरुको ग्राफ दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको अवस्थामा तपाइले स्वदेश मै अध्ययन गरेर आफुलाई उत्कृष्ट सावित गर्नुभयो । अव, विदेश जान लालायित तपाई जस्तै युवाहरुलाई के सुझाब दिनुहुन्छ ?
नयाँ कुरा सिक्न विदेश जाने कुरा सकरात्मक छ । तर, स्वदेशमा पढ्दा नराम्रो हुने र विदेशमा पढ्ने वित्तिकै भविष्य सुनिश्चित हुने हुदैन । पढ्नविदेश जानु राम्रो हो तर, आफ्नो जवानी नै पिआर र ग्रिनकार्डको सपनामा व्यत्तित गर्नु अर्थहिन हुन्छ । अव विदेशमा अध्ययन गरेका युवाहरुले पनि स्वदेशमा आएर आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्नु भयो भने नेपाल चाँडै नै अगाडी बढ्न सक्दछ ।
अन्त्यमा, तपाईको भावी योजना के छ ?
उच्चतम चेतनायुक्त कुराहरु पढ्नु मेरो सोख हो । कहिलेकाँही राजनीतिको कारण पढाईमा कमी आउने हो कि भनेर चिन्ता लाग्छ । तर, राजनीति छाड्न सकिन्न । यो लत बनिसकेको छ । जीवनमा परिवार, राजनीति, पढाइ÷लेखाई र पेशालाई संगसगै अगाडी बढाउदैलाने योजना छ ।